Kenyà 31 Jolay 2012
Julius Yego, Afrikanina Kenyana tompondaka nasionaly teo amin’ny taranja “javelot na toraka lefona”, no nandresy nandritra ny fifaninanana atletisma tao Finlady tamin’ity herinandro ity. Taorian'ny fampiasany YouTube mba hanatsarany ny fahaiza-manaony sy ny teknika, niakatra 81.12 metatra ny halavirana vitan’i Yego. Bilaogin’ny SportsKenya (Fanatanjahatena Kenya) nandrakitra ny zava-bitan’i Yego: mampandeha irery...
Sodàna Atsimo 29 Jolay 2012
Eoropa Andrefana 27 Jolay 2012
Brezila: Mafàna Fo Niverina Hiampanga Ny Vale, Orinasa Breziliana Mpitrandraka Arintany
Jeremias Vunjanhe, Mozambikana iray mpanao gazety sady mafàna fo dia noraràna tsy hiditra tany Brzila nandritra ny Rio+20. Taoran'ny fanetsehana ireo fiarahamonina sivily sy fikambanana maro, tafaverina tao amin'io fireena io ihany i Jeremias mba hiampanga ny fihetsik'ilay orinasa Breziliana Vale.
R.D. Kongo 26 Jolay 2012
Ghana: Lohahevitra Tao Amin'ny Tontolon'ny Twitter Ghaneana Ny Fahafatesan'ny Filoha-
Ghana 25 Jolay 2012
Ny 24 Jolay 2012 dia niaina zavatra nampalahelo i Ghana, sambany teo amin'ny tantarany: Ny filoha amperin'asa no nodimandry.. Nampiasa ny Twitter hamoahany ny hatairany sy ny alahelony ireo Ghaneana .Nikapoka tao amin'ity tranonkalanà media sosialy ity ny vaovao momba ny nahafatesan'ny Filoha talohan'ny nanamafisan'ireo tranom-pampahalalam-baovao azy ho ofisialy.
Madagasikara 25 Jolay 2012
Azia Atsinanana 20 Jolay 2012
Nampiditra orinasa Shinoa ny governemanta ao Angola mba hanangana tranobe lafo dia lafo miisa 750 ao Kalimba, eo ho eo amin'ny 30 kilometatra ivelan'i Luanda. Na dia eo aza ny fananana harena an-kibon'ny tany, dia olona maro ao Angola no miaina ao anaty fahantrana tanteraka ary tsy mahatakatra ny vidin'ireo tranobe. Ho lasa tanàna lehibe indrindra ao Afrika ve Kalimba?